Su'aal: Waxaan dhawan isku arkay xaakada oo dhiig leh?
Author Topic: Su'aal: Waxaan dhawan isku arkay xaakada oo dhiig leh? (Read 2146 times)
« on: June 26, 2017, 03:22:25 AM »
Asc dhaman musliminta oo than waxaan leeyahay cid mubarak . all aniga waxaan dhawan isku arkay xaakada oo dhiig leh wxaanan aad iskugu arkay maarka qaar ee matag iiqabto ee aan matago kafib xaakada soo go aysa iyo caandhuuftaa ayaan xinjiro dhiiga ku arka mararka qarna maarkii aan cadayanayo ee aan xakada iska soo fujinayo dhinaca cuunaha ayaan waxaan arkaya xaakadii oo dhiigbadan wadata oo isku mimla wll aad iyo aad ayaan uuga walwalsanahay
Re: Su'aal: Waxaan dhawan isku arkay xaakada oo dhiig leh?
« Reply #1 on: April 13, 2018, 08:57:39 PM »
Haddii xaakadu dhiig yeelato mar walba oo aad dhiig matagtid kaliya waa ina la ogaadaa sababta aad dhiiga u matagaysid iyo inaad leedahay boog calooleed gaaska uu keenay, laakiin haddii aad xaako dhiig isku aragtid mar walba oo aad cadayanayso oo aysan xiriir la lahayn mataga waa in feeraha lagaa fiiriyaa si loo ogaado in xaakadu ay sanbabka ka socoto ama wadnaha. marka laba gooraba dhaktharka kama maarmaysid.
Views: 19396 January 29, 2012, 10:50:28 PM
Views: 19338 April 20, 2015, 12:29:25 PM
Views: 18639 November 01, 2011, 10:39:11 PM
Views: 6299 January 09, 2016, 03:27:06 PM
Views: 5761 February 12, 2016, 08:11:39 PM